China Dongshen manokana marika ambongadiny resin fanao voajanahary tsara indrindra badger volo matihanina lehilahy manaratra volom-borona mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen manokana marika ambongadiny resin fanao voajanahary tsara tarehy badger volo lehilahy matihanina borosy
Ny borosy fanaratsiana Dongshen dia vita tanana amin'ny volo badger tsara indrindra sy tantana resina. Natao hanalefaka ny volombava alohan'ny aharatra, tsy misy mahasosotra ny hoditra. Tsy misy fihenan'ny volo, tsy misy fatiantoka tantanana, manala ny sakaizanao maharitra amin'ny fombafombam-bolo isan'andro.
Deluxe Borosy fiharatana Badger Ho an'ny Tompokolahy rehetra
Ianao ve mitady borosy manara-penitra miisa 100% Badger Hair Bristles izay hamadika ny volonao ho traikefa toy ny mpanety?
Mitondrà tena amin'ny fampiononana mahafinaritra an'i Borosy fiharatana Badger tsara indrindra Nosoratan'i Dongshen
Miteraha volom-borona manaratra manankarena ary manome traikefa fanaratsiana mamelombelona avy amin'ny fahamoran'ny tranonao! Ny borosy fiharatantsika tena tsara, vita amin'ny 100% volo hafa mora voajanahary dia hanampy anao hitsitsy fotoana sy vola amin'ny mpanety lafo!
Safidio izay hahamora sy mahamety ny fikolokoloana ny volonao tarehy amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny borosy fiharatana mahazatra izay manadio tsara ny hoditrao, miteraka famoronana sela hoditra vaovao ary manome endrika tsy manam-paharoa ny tarehinao!
● TECHNOLOGY: famokarana vita tanana, ny volo borosy rehetra dia mila mandalo fomba fiasa miisa 25, volo mihombo tsara indrindra, miaraka amin'ny endrika mahafinaritra ary tsy misy raraka, tsy misy fofona mahatsiravina, volavolaina miaraka amina resin voajanahary.
● TOETRA: Ny volo badger dia landy, malefaka ary mafy orina, satria ny rano mandray sy ny fitazonana ny hafanana dia mety tsara amin'ny savony fiharatana rehetra sy ny felam-bolo rehetra, ny gel na ny menaka rehetra, mety tsara amin'ny fikolokoloana matevina sy malefaka, mora diovina ary maina vetivety .
● Tanjona: tonga lafatra ho an'izay tia ny volon-doha nentin-drazana, hevitra fanomezana lehibe ho an'ny rainao, ny vadinao, ny sipanao, na ho an'ny mpangataka mando mitady fitambarana mahafinaritra.
● TOROHEVITRA: Torio tsara ilay borosy fiharatana, ahintsano ary ahantony mba ho maina. Ny faharetan'ny borosy fanaratra volom-bava misy kalitao dia mifandray mivantana amin'ny fikarakarana sy ny fanajana omena azy.
Fampiasana eran'izao tontolo izao: Ny vokatra aharatra amin'ny lehilahy lavorary ho an'ny hareza rehetra
Namboarina tamin'ny volom-borona matanjaka niaraka tamin'ny tanany ergonomika hahazoana antoka ny fihazonana mafy, ny borosy fiharatantsika no mahatonga ny sakaizanao maharitra amin'ny fombafombam-bolo isan'andro.
Mety raha ampiasaina amin'ny Safe Razor, Razor Double Edge, Razorà mahitsy ary karazan-karazam-bolo rehetra, ny volon-koditra volon-koditra vita amin'ny volon-koditra tsy misy fangarony dia manadio ny volon-tarehy mando amin'ny fikolokoloana malefaka tsy misy toa izany!
Tena izy Borosy fiharatana Badger
Ho mariky ny maha-azo itokiana ny volo, ny borosintsika manaratra dia mety hanana fofona voajanahary voajanahary rehefa ampiasaina amin'ny voalohany- aza manahy fa ho afaka tsy ho ela!
Esory ny fandatsahana antonony ny borosy fanaratra badger anao amin'ny alàlan'ny fisorohana ny rano mafana- ampiasao rano mafana izy io mba hitazomana ny volony ho malefaka sy hamirapiratra, ho an'ny fanaratra lava lava kokoa!
Teo aloha: Dongshen borosy avo lenta voajanahary voajanahary volo resin mitana marika manokana borosy fiharatana tarehy
Manaraka: Dongshen avo lenta voajanahary matanjaka roa tarika badger volo resin mitana fanao logo lehilahy lena borosy fiharatana
Borosy fiharatana Badger
Borosy fiharatana Badger tsara indrindra
Borosy fiharatana men
Borosy voajanahary voajanahary
borosy fanaratra momba ny marika manokana
borosy fiharatana ambongadiny
Dongshen marika manokana kilasika 3-roa avo roa he ...
Ny borosy makiazy Dongshen dia mametraka syn-free habibiana tsy misy habibiana ...
Dongshen ambongadiny marika manokana tsy lafo vidy voajanahary ...
Dongshen haitraitra hazo voajanahary voajanahary fiarovana hareza ...
Borosy makiazy Dongshen ambongadiny ambongadiny tena ...
Fitaovana borosy makiazy, Faritra fiharatra, Manaova borosy, Mametraha makiazy borosy, borosy makiazy napetraka, Barber Shave,